Shiinaha Ebil- CE Warshadaha Shahaadada Qalinjabinta iyo soosaarayaasha | EBIL
Xulashada 'Pallet Rack'
Birta, Q235 b
Ilaalinta Burburka, Ilaalinta Burburka
Rakada Warehouse, Rugda Warehouse
1500-4500kgs / heer
budo budo ah
Buluug, oranji, cagaar, casaan, cawlan
Biinanka 'Teardrop pallet'
Rakada 'Teardrop pallet' waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee boorarka 'pallet' oo ay isticmaalaan bakhaarada bakhaarada iyo xarumaha lagu qaybiyo ee Ameerika oo dhan. Rakarka 'Teardrop pallet' waa magac kale oo loogu talagalay biraha xulashada ah ee loo yaqaan 'pallet rack', kaas oo inta badan lagu soo saaro qaab teardrop ah (naaneysta maxaa yeelay godadka ku yaal khaanadda qumman waxay u ekaayeen sidii teardrop). Boorarka ayaa markaa ku nasan doona laambadaha xarkaha safka ah ee ay ku dhegan yihiin adoo kor u qaadaya xargaha. Sababtoo ah xirmooyinka ku yaal habaynnada teardrop si dhakhso ah ayaa loo saari karaa, khaanadaha waxaa lagu hagaajin karaa heerar kala duwan ama la xoojin karaa si ay u qaadaan culeysyo kaladuwan si ay u qaabeeyaan cabbirro kala duwan oo culeys ah.
Shaqee meelaha banaan ee keydinta iyo helitaanka agabka. Dhaqaalaha - iibso oo iibi santuuqyada teardrop pallet.Soo daabacan culeysyo iyo cabirro kaladuwan. CksTeardrop pallet-ka waa la isweydaari karaa inta badan soosaarayaasha. ee loo yaqaan 'teardrop' ayaa loo isticmaali karaa si wada jir ah iyadoo la siinayo dhowr ikhtiyaar marka la dooranayo qalabka loo yaqaan 'pallet'.
Bakhaarada bakhaarka bakhaarka ayaa leh laba qaybood oo alwaaxaysan ama xidhmaysan. Xiriirkooda shaashadda-to-frame ayaa abuureysa qaabka ugu adag, qaab-dhismeedka lagu kalsoonaan karo ee la heli karo. Dheecaan dhaldhalaalka ah ayaa la dhammeeyaa iyo daboolida budada waarta waxay hubisaa cimri dheeri ah oo adeeg ee nidaamka kaydinta bakhaarkaaga, xitaa marka lagu jiro xaaladaha ugu daran. UGU DAMBARASHADA Faa'iidooyinka Waxaa ku jira: Duul marin u hel baakad kasta. Kaydinta miiqyada iyada oo la adeegsanayo alwaaxyo ballaaran oo kuxiran isku xirka bastooladaha.
A: Waxaan nahay xirfadle oo hogaamiya soo saare ku dhawaad ​​20 sanadood. Waxaan soo saarnaa oo aan u dhoofinaa boorsooyin tayo sare leh oo tayo sare leh, Nidaamka boogaha ee kaladuwan iyo Rodio gaari-wadida, ASRS oo sumcad ku leh macaamiisheena. Awooda wax soo saarka ee anual
Hore: warshad rakhiis oo jaban oo jaban oo la adeegsaday oo si dhakhso leh loogu keeno
Xiga: Qalabka Bilaashka ah ee Qalabka culus ee Qalabka Birta / Qalabka Kuraasta / Kaydinta Kaydka Weelka
Asal aamisan , Xarig , Qalabka Birta , Xidhitaanka lakabyo Badan , Wadada Shanaad , Suuqa Suuqa ,